China Mirror Side PK9849 Emeputa na soplaya | West Bridge
Enyo n'akụkụ mirror PK9470
Mirror Side maka forgbọala PK9583
Akụkụ Igwe Nlere Anya PK9780
Mirror Mirror PK9883
Mkpocha Akpa Side PK9849
Mkpocha Akpa Side PK9823
Mkpocha Akpa Side PK9822
Mirror Mirror PK9810 n'akụkụ ụgbọala
Mkpocha Akpa Side PK9592
Mirror Mirror PK9590
A na-emepụta mmepụta anyị mgbe niile dịka ọkọlọtọ mba si echekwa ụkpụrụ dị mma mana na-ejikwa ngwa ngwa na usoro ntinye. Ọtụtụ enyo enwetala E-mark na akwụkwọ DOT.
* Nkọwa ngwaahịa
A na-emepụta mmepụta anyị mgbe niile dịka ọkọlọtọ mba si echekwa ụkpụrụ dị mma mana na-ejikwa ngwa ngwa na usoro ntinye. Ọtụtụ enyo enwetala E-mark na akwụkwọ DOT. N'ihe karịrị afọ 10 ahịa ahịa maka gwongworo na mapụtara akụkụ ebe ọ bụ na ntọala, ọkachamara na-eweta ngwaahịa Sinotruk ma wulite mmekọrịta dị omimi nke ụlọ ọrụ na Sinotruk. ụwa ụwa, na-ewere ụzọ mmeri iji merie elele ndị ahịa. Anyị nwere ndị ọrụ aka na ahịa nke aka anyị, ụlọ ọrụ nyocha na mmepe, na ndị otu ọrụ ọkachamara na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ọkachamara ga-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ahịa ịtọ na karịa ebumnuche iji mezuo ebumnuche niile.
PK NO PK9849
Na-eme Mitsubishii Rosa usoro
OZI OEM MB094920
* Ntak emi Họrọ Anyị
* Site anyị, ị pụrụ ịchọta niile ụgbọala akụkụ ahụ mapụtara na ị chọrọ
* Anyị na-ebupu iwu niile n'oge.
* Anyị na-ebupụ akụkụ anyị n'akụkụ ụwa niile.
* All iwu na-juru n'ọnụ dị ọcha ma jiri nlezianya
* Quality Parts with Professional Service na asọmpi Ahịa
* SWB ọkachamara na Trọk & Bus ubi na àgwà dabeere.
* Anyị ga-aza gị maka ajụjụ gị n'ime awa 24.
* Anyị na-asọpụrụ ndị ahịa ọ bụla dịka ndị enyi anyị ma anyị ji obi anyị niile na-azụ ahịa ma soro ha nwee enyi, n'agbanyeghị ebe ha si.
* Quality mbụ, aha kasị elu, kacha mma-edu ọrụ na, ahịa afọ ojuju
* Ọrụ Anyị
Ihe mgbaru ọsọ mbụ anyị bụ imeju ọchịchọ ndị ahịa ma nye ha ngwaahịa dị elu maka ọnụahịa kachasị asọmpi.
N'ihi na nke anyị mmepụta na-mgbe mepụtara dị ka ọkọlọtọ mba na-akwanyere àgwà ọkọlọtọ kamakwa optimistic lọjistik na ọkọnọ yinye.
Mgbe anyị zipụchara, anyị ga-esoro gị ngwaahịa a otu ugboro kwa ụbọchị abụọ, rue mgbe ị nwetara ngwaahịa ahụ. Mgbe ị nwetara ngwongwo, nwalee ha, ma nye m nzaghachi .Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nsogbu ahụ, kpọtụrụ anyị, anyị ga-enye gị ụzọ edozi gị.
* Nkwakọ ngwaahịa na Transportgbọ njem
Anyị kasị ọkachamara packing.Enerally, afụ akpa mbụ, ngwugwu na katọn. anyị na-akwakọ ngwongwo anyị na igbe ọcha ndị na-anọpụ iche na katọn aja aja. Ọ bụrụ na ị debanyere aha patent iwu, anyị nwere ike iburu ngwongwo na igbe igbe gị ama ama mgbe ị nwetasịrị akwụkwọ ikike gị.
Transportgbọ njem nke nnukwu ụgbọala gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri
Nkwado ụgbọ njem mba ofesi
Site na ozi, dịka DHL 、 UPS 、 FEDEX wdg.Ọ bụ n'ọnụ ụzọ n'ọnụ ụzọ, ọ na-abụkarị 3-7 ụbọchị ọrụ iji rute.
Site na ikuku n'ọdụ ụgbọ elu, ọ na-abụkarị 7-12work ụbọchị iji rute.
Site n'oké osimiri ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri, na-emekarị 25-40work ụbọchị na-abata.
Nke gara aga: Mkpocha Akpa Side PK9823
Osote: Mirror Mirror PK9883
Mkpocha Akpa Side PK94PK9482
Mkpocha Akuku Side PK9468
Mkpocha Akpa Side PK9438
Mkpocha Akpa Side PK9512
Debanye maka akwụkwọ akụkọ anyị iji nọrọ na-aga n'ihu na nkwalite anyị, ego, ahịa, na onyinye pụrụ iche
Tinye: 10F, Wanjia Plaza, Jingao Rd 377, Shanghai, PRC